Soo dejisan G Data Internet Security 25.5.7.26 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudG Data Internet Security
Bogga rasmiga ah: G Data Internet Security
G Data Security Internet – ilaalin lagu kalsoonaan karo ee kombiyuutarka aad ka soo horjeedo fayraska, nadaafada, iyo handadaada internetka. Software wuxuu siiyaa difaac ka horjeeda khataraha aan la garanayn sababtoo ah iyada oo la kaashanayo kormeerka akhlaaqda iyo daroogooyinka daruuraha. G Data Security Internet wuxuu ka hortagayaa dambiilayaasha in ay xareystaan feylasha userka ayna isticmaalaan dayacmooyinka ammaanka ee software la rakibay. Dab-damis la dhisay ayaa si guul leh u xakamey weerarrada websaydhka iyo isku-dayga tijaabada dekedda iyo sidoo kale waxay ogaadaan calaamadaha adeegsiga si xun u adeegsiga shabakadaha aan la aqoon. G Data Security Internet wuxuu damaanad qaadayaa ilaalinta ugu wanaagsan inta lagu jiro surfing webka iyo iibsashada internetka ee ka soo horjeeda bogagga shabakada phishing, keyloggers, iyo xatooyada xogta qarsoodi ah. Software waxay hubineysaa email-ka ah xayawaanno xaasidnimo ah iyo filter-ka-dhiska spam-ka ah ayaa ilaalinaya isticmaalaha xayeysiiska, phishing, iyo fariimaha kale ee aan la rabin. G Data Security Internet wuxuu taageersan yahay xakamaynta waalidka si loo xakameeyo carruurta ka soo horjeeda waxyaabaha aan loo baahnayn ee internetka, macluumaadka xogta lagu kaydiyo oo lagu kaydiyo kaydinta daruuraha, tirtiridda faylasha ka baxsan dib u soo kabashada iyo xakamaynta codsiyada bilaabida.
La socoshada xiriirada soo socda iyo kuwa xiga
Ilaalinta faylka akhlaaqda
Ma saameynayo waxqabadka nidaamka
Soo dejisan G Data Internet Security
Faallo ku saabsan G Data Internet Security
G Data Internet Security Xirfadaha la xiriira